भारतीय फिल्म फेयरमा चार पाकिस्तानी ‘नोमिनेट’
२०७३ पौष २८ बिहीबार ००:०५:००
काठमाडौं । सीपकला र क्षमतालाई कुनै देशको सीमाभित्र कैद गरेर राख्न सकिँदैन । कलाको बजार विश्वभर छ । कलाकारको माग पनि उस्तै छ । नेपाली कलाकार भारत जान सक्छन् र आफ्नो कला प्रस्तुत गर्न सक्छन् साथै पुरस्कार पनि जित्न सक्छन् । त्यस्तै भारतमा पनि पाकिस्तानी कलाकार आउन सक्छन् । राम्रो गाउन सक्छन् । र फिल्मफेयरजस्तो अवार्ड जित्न सक्छन् । सन २०१६ का लागि बलिउडको उत्कृष्ट पुरस्कार वितरण समारोहमा यस्तै चार पाकिस्तानीले पनि फिल्मफेयर अवार्डको नोमिनेशनमा आफ्नो नाम दर्ता गरेछन् । यो उनीहरुको खुबी र कलालाई लिएर बलिउडले यो सम्मान दिएको छ । यद्यपि फिल्म फेयरलाई नै लिएर एउटा विवादित विषय पनि बन्यो त्यो हो स्टार अक्षयकुमारको नोमिनेशन । उनका समर्थकले त्यो नामांकनमा अक्षयलाई कहीँ भेटेनन् र आफ्नो रुष्टता सामाजिक सञ्जालमा पोखे । आउनुस् यहाँ हेरौँ पाकिस्तानी कलाकारलाई फिल्म फेयरमा नोमिनेशन गरिएको बारे यो बीबीसीको खबरः
मनोरञ्जनको दुनियाँमा बलिउड होस् या हलिउड, वर्षको सुरुआत सधैँ रंगिन अवार्ड समारोहका साथ हुने गर्छ । तर, भारतीय सिनेमाका लागि ज्यादै लोकप्रिय मानिने ‘जियो फिल्मफेयर पुरस्कार’ मा यो पटक ठूलो परिवर्तनका देख्न सकिन्छ । १४ जनवरीमा मुम्बईमा आयोजना हुने ‘जियो फिल्मफेयर पुरस्कार’ का लागि चार पाकिस्तानी कलाकारलाई पनि छनौट गरिएको छ । र, यो आफै एउटा कीर्तिमानी काम पनि हो । नामांकनको सूची जारी गरिसकिएको छ ।
फवाद खानलाई गतवर्ष चलचित्र ‘खुुबसुरत’ का लागि ‘बेस्ट मेल डेब्यु’को पुरस्कार प्राप्त भएको थियो । जबकि राहत फतेह अली खानलाई चलचित्र‘इश्किया’को गीत ‘दिलतो बच्चा है जी’का लागि सन २०११ मा पुरस्कारबाट सम्मानित गरिसकिएको छ ।
उल्लेखीय यो छ कि, पाकिस्तानी कलाकारहरूलाई भारतीय चलचित्रमा काम गराउने विषयलाई लिएर बलिउड पनि दुई कित्तामा विभाजित छ । अर्को कुरा नामांकन (नोमिनेशन) जारी गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा एउटा बहसको विषय भएको छ । यसमा बढी जसोले अक्षयकुमारलाई उत्कृष्ट अभिनयको श्रेणीमा नोमिनेशन किन गरिएन ? भन्ने विषयलाई लिएर रुष्टता प्रकट गरेका छन् ।
पाकिस्तानी कलाकारहरुको यो सूची हेरौँ ।
चलचित्र– कपुर एण्ड सन्स
विधा– सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता
२. आतिफ अस्लम
चलचित्र– रुस्तम (तेरेसंग यारा)
विधा– सर्वश्रेष्ठ गायक
चलचित्र– सुल्तान (जग घुमिया)
विधा– सर्वश्रेष्ठ गायिका